Maamulka Sucuudiga oo ku dhaqaaqay arrin af kala qaad ah! | Hadalsame Media
Home Madadaalada Maamulka Sucuudiga oo ku dhaqaaqay arrin af kala qaad ah!
Maamulka Sucuudiga oo ku dhaqaaqay arrin af kala qaad ah!
(Jiddah) 09 Luulyo 2019 – Gabadha heesaha Raabka ah qaadda ee Nicki Minaj ayaa 18-ka bishan bandhig faneed ku qabanaysa magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga. Gabadhan ayaa caan ku ah heesaha anshaxa u daran, (hyper sexualized music) iyada oo kaliya xirata maryaha hoose ee dumarka ama badanaa u muuqata qof dhar sidata balse qaawan.
Garoonka ciyaaraha ee King Cabdallah ee magalaada wayn ee Jiddah, ayaa lagu qaban xafladda. Waxa galaya dadka ka weyn 16-ka sano. Waxa la sheegay in la fasaxay oo xor laga dhigay khamriga iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya. Dalka Sacuudiga ayaa ay markii hore ka mamnuuc ahayd khamrada iyo muusigga noocan ahba.
Dadyowga Sacuudiga kunool qaybtood ayaa u arka arrikan arrin mamnuuc ah. Halka kuwa kale ayba sugi la’yihiin bandhigga.
Xigasho: Mohamud Daahir
Previous articleCiidamada Maraykanka & kuwa Komaandooska Danab oo la sheegay inay burburiyeen hanti gaar ah
Next articleDF Somalia oo ka hadashay warar sheegaya inay xeer-jajab ka geleeyso arrimaha badda